ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ မႏၲေလး ျပန္မေရာက္ေသး၊ စိုးရိမ္စရာ မရွိေသာ္လည္း ေဆးဝါးကုသမႈ ဆက္လက္ခံယူရဦးမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လာမည့္အခ်ိန္ မသိရေသးဟုဆို - Mandalay In-depth
ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင် မန္တလေး ပြန်မရောက်သေး၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိသော်လည်း ဆေးဝါးကုသမှု ဆက်လက်ခံယူရဦးမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လာမည့်အချိန် မသိရသေးဟုဆို
Mg Tar နိုဝင်ဘာ 9, 2019 11:56 ညနေ 0
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် မန္တလေးမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း မရှိသေးဘဲ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဥက္ကဌ ဦးတင်ထွဋ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ အာဏာရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ အဖြစ်လည်း တာဝန်ယူထားသည့် အသက်(၆၈)နှစ်အရွယ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ(၂၄)ရက် နောက်ပိုင်းကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာ(၂၄)ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒီချုပ်ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ပါတီ၊ အစိုးရ၊ လွှတ်တော် တွေ့ဆုံပွဲတွင် တွေ့ရသည့် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်။ Photo – YuYuMay Fb.
“ကျွန်တော်နဲ့ ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ ကျန်းမာရေးက အိုကေတယ်။ ဘယ်နေ့ ပြန်လာရမလဲ ဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ (၈)ရက်နေ့ ပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာကလည်း မဟုတ်ဘူး။ အဲ့နေ့က အန်တီယု (ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၏ ဇနီး ဒေါက်တာယုယုမေ) ပြန်လာတာ” ဟု ဦးတင်ထွဋ်ဦးက Mandalay In-depth News သို့ ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ကာ ရက်ရှည်ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရသည့် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ရောဂါဖြစ်ပွား၍ မည်သို့ ကုသမှုခံယူနေရသည် ဆိုသည်ကိုမူ ဒီချုပ်ပါတီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူများက ထုတ်ပြန်ပြောကြားခြင်း မရှိပါ။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် ကျန်းမာရေးအရ စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲ အစိုးရနှင့် ပါတီအတွက် အလုပ်နှစ်ခု ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နေရ၍ ပင်ပန်းကာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အနားယူ ကုသနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးမြတ်သူက ပြောကြားထားသည်။
ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်သည် သာမန်ရုံးဖွင့်ရက်ဖြစ်သည့် တနင်္လာမှ သောကြာနေ့များတွင် မန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ပြီး ရုံးပိတ်ရက် စနေ၊တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ပါတီတာဝန်များ လုပ်ကိုင်ကြောင်း ၎င်းနှင့်နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ(၁)ရက်ကမူ ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရသည့် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် အမြန်ကျန်းမာစေရန် အတွက် ဟုဆိုကာ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့တွင် ဒေသခံတစ်ရာကျော်က မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
အောက်တိုဘာ(၂၃)ရက်က မန္တလေးတွင် ကျင်းပသည့် ကျောက်စိမ်းရောင်းချပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် နှင့် မန္တလေးတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ။ Photo – Mandalay In-depth News.
လက်ရှိတွင် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ကိုယ်စား မန္တလေးတိုင်း လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်က မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည်။
မန္တလေး မဟာမုနိ ဘုရားကြီး...0comments | posted on November 4, 2019
မလှိုင်မြို့နယ် ရွှေပေါ်က...0comments | posted on July 13, 2019
မန္တလေးတွင် သီတင်းသုံးနေထ...0comments | posted on July 24, 2019